Deegaanka | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 25 10 2021
Gudaha Iswiidhan waxaad u noolaan kartaa qaabab kala duwan. Waxaad kireysan ama iibsan kartaa guri yar. Waxaad kireysan ama iibsan kartaa guri weyn. Boggagan waxaad ka helaysaa macluumaad ku saabsan qaababka kala duwan ee loo noolaado iyo sida aad samayn karto si aad u raadiso hoy.
Halkan waxaa ku jirta warbixin ku saabsan hoyga oo loogu talogalay adigaaga ah magan-gelyo doon.
Halkan waxaa ku jirta warbixin ku saabsan hoyga oo loogu talogalay adigaaga yimi Iswiidhan adigoo aan waalidkaa kula socon.
Adigaaga helay sharciga deganaansho kuna nool hoyga la dego ee Hey'ada Socdaalka, ama adigaaga qaxoonti la soo qaaday ahaan ku yimi Iswiidhan, waxaad heli kartaa caawimaada guri ku yaala degmo.
Hey'ada Socdaalka ayaa u gudbisa degmooyinka inay qaabilaan dadka dhawaan helay sharciga deganaansho. Marka degmo hesho soo gudbin waxay tani tahay in degmadu mas'uul ka tahay inay kuu diyaariso guri.
Adigu ma dooran kartid degmada aad doonaysid in laguu gudbiyo. Waxaad helaysaa hal casuumaad oo keliya dhanka u gudbinta degmo. Haddii aad diido waa lagaa saarayaa nidaamka qaabilaada ee Hey'ada Socdaalka. Markaasi adigu xaq uma lihid kaalmo iyo hoy aad ka hesho Hey'ada Socdaalka oo waa inaad keligaa diyaarsataa guri.
Akhri dheeraad ku saabsan degitaanka degmo oo ku qoran Hey'ada Socdaalka bogeeda. Warbixintan waxay ku qorantahay Iswiidhish oo keliya.
Dadka iswiidhan deggan oo dhan waa la diiwaan geliyaa. Waxaana lagu qoraa halkaas kuwa degen iswiidhan iyo halka ay deggen yihiin.
Halkan ka akhri dheeraad ku saabsan diiwaan gelinta dadweynaha.